Google Chrome တွင် မြန်မာစာ ဖတ်နိုင်၊ ရေးနိုင်ရန်... - အရူးလေး ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Google Chrome တွင် မြန်မာစာ ဖတ်နိုင်၊ ရေးနိုင်ရန်...
Google Chrome တွင်မြန်မာစာရေးနိုင်၊ ဖတ်နိုင်ရန်အတွက် ဒီဘလော့ကို ရေးပေးလိုက်ပါတယ်၊
အချို့သောသူတွေ မေးထားတာတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ၊ သိပြီးသား သူတွေလည်း အများအပြားရှိမှာပါ၊
သိပြီးသားသူတွေအတွက်တော့ မရည်ရွယ်ပါဘူး ခင်ဗျာ ... ။
Google Chrome မှာက သူ့ရဲ့version တိုင်းမှာ မြန်မာလိုမရပါဘူး၊ ရရင်တောင်မှ အပြည့်အ၀ မမြင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း version တွေမှာတော့ ရတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် windows XP ကော၊
windows764bit မှာ လုပ်ကြည့်လို့ ရသွားတဲ့ version ကိုပါ တစ်ခါတည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
ပထမဦးဆုံး အခုပေးထားတဲ့ လင့်ကနေ Google Chrome ကို အရင်ဒေါင်းလုပ် ယူလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Google Chrome 15.0.874.15 Beta ဒေါင်းလုပ်လင့်
ပြီးရင် install လုပ်ပြီး browser ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ...
- ပထမဦးဆုံး Browser ရဲ့ setting ထဲကို ၀င်ပါမယ် ၊ အောက်မှာပုံနဲ့တကွပြထားပါတယ် ပုံ(၁)ကို ကြည့်ပါ..
- ပြီးရင် setting ထဲက option ကိုဝင်ပါ ၊ ပုံ (၂)ကိုကြည့်ပါ ..
- option ထဲရောက်ရင် Under the Hood ကိုရွေးပြီး၊ Customize fonts.. ထဲကိုဝင်ပါ၊ ပုံ (၃) ကိုကြည့်ရန်
- Customize fonts ထဲရောက်ရင် အားလုံးကို Zawgyi One font ပြောင်းပေးလိုက်ရင် ရပါပြီခင်ဗျာ ၊ ပုံ (၄) ကိုကြည့်လိုက်ပါ..
ဒါဆိုရင်တော့ အားလုံး အိုကေ သွားပါပြီခင်ဗျာ ၊ အဆင်ပြေကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
အားလုံးကို လေးစားစွာဖြင့် honestboy သူ့ ကိုတော့ နတ်သားလေးလေးစားပါတယ် အပေါ်ကပုံတွေမှာ သူ့ မေးလ်ကိုတောင်ထည့်မထားဘူ နာမည်လဲမကြီးချင်ဘူးတကယ်လေးစားထိုက်ပါတယ်
+ မှတ်ချက် +6မှတ်ချက်
19 May 2012 at 18:46
thz so much nyi
24 September 2013 at 13:18
Hello! I just ωish to give youahuge thumbs upp for the great informatiоn уou've got гight
here on this post. I am returning tо youг web sitе for
Also vіsit my page :: Den Archives » Chris Wolfe Antique Furniture Store Frederick MD Maryland Chris Wolfe Antique Furniture Store Frederick MD Maryland
23 November 2013 at 00:38
အကို google မှာအကုန်လုံးမြန်မာစာဖတ်လိုရ ကြည့်လိုရအောင် ဘယ်လိုလုပ်တာလည်း သိရင် ခဏပြောပြပေးခင်ဗျား
windows 8 သုံးမှ မြန်မာလို အကုန်မြင်ရမှာပါ